မန္တလေး တွင် မိန်းမလျာများအား ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် | The FNG
မန္တလေး တွင် မိန်းမလျာများအား ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်
July 11, 2013 · by 21 South News	· in (unnamed), သတင်း ဆောင်းပါး.	·
ထိုနေ့က ကျုံးအရှေ့ဘက် ၆၆ လမ်း၊ ၁၂ မှ ၂၆လမ်း အတွင်း ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံနှင့်လိုက်လံဖမ်းစီးသည်။
၇ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၁၃၊ ဆီဒိုးနားထောင့် အချိန် ဂ နာရီ ၁၅ မိနစ် ကားနှစ်စီး( လိုက်ဒရတ် အသေးတစ်စီး၊
ဆလွန်းကား တစ်စီး) ဆိုင်ကယ် ၆ စီး စုစုပေါင်ရဲ (အရပ်ဝတ်။ ပိုဆိုး ရှပ်အကျီတို့ဝတ်ဆင်လျက်) အင်အား
၂၀ယောက်နီးပါး ၂၆လမ်း ၆၆ လမ်းဒေါင့် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရှေ့တွင် မိန်းမလျာ (အမျိုးသမီးကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်ထားသူများ) ၊
အပုန်း(ယောက်ျားကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်လျက် မိန်းမစိတ် ပေါက်သူ)များအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ပြည်သူလူတို့
အများအပြားကြားမှ ရုံးရင်းဆန်ခတ် လက်ထိတ်ခတ် ဖမ်းဆီးရိုက် နှက် ဆံပင်တု ဆွဲချွတ် ချုပ်နှောင်ဖမ်းစီးသည်။
စုစုပေါင်းအဖမ်းခံရသူ ၉ ဦး မှ ၁၀ ဦးရှိသည်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့်နေရာ လမ်း၃၀၊ ၆၉/၇၀လမ်းရှိ ရဲတိုင်းရုံး
သို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် ရိုက်နှက်စစ် ဆေး ၊ အပေါ်ပိုင်းအ၀တ်ချွတ် ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ဖားခုန်ခုံခိုင်း၊ မော်ဒန်ရှိုးလျောက်ခိုင်း၊
ဖိနပ်တိုက်။ ခုံသုတ်၊ မတ်တပ်ရပ်ခိုင်း၊အာမခံပေး။ လက်မှတ်ထိုးခံဝန်(ဆီဒိုးနားထောင့်သို့မသွားတော့ပါ၊ မိန်းမလို
မ၀တ်စားတော့ပါ။) ပြန်လွတ် (12နာရီ/1နာရီ/2နာရီ)။တချို့မှာလဲ အကန်ခံရ အရိုက်ခံရပြီးမှ ဆိုင်ကယ်များအား
ထားပြစ်ခဲ့ကာ ခြေဦးတည့်ရာသို့ပြေးရင်း၊ ပုန်းရင်း ဆိုင်ကယ်ကြုံများမှ ကူညီပေးရင်း အိမ်သို့ပြန်ရောက်သွားခဲ့ကြသည်။
၁။ က (အလှပြင်)
၂။ ခ( ဖမ်းဆီးသည့် တိုင်းရဲဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူ တပ်ကြပ်ကြီး (ယာဉ်ထိမ်းရုံး) ၏ သား)
အရိုက်နှက် စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရခြင်းမရှိ ဖခင် အားအကြောင်းကြားပြန်လွှတ်)
၃။ ဂ (Offer)
၄။ဃ (PSI Staff)
၅။ င( အလှပြင်)
၇။ ဆ ( Offer)
၈။ ဇ (offer)
၉။ အပုန်း(၁) ဈ (မှီခို)
၁၀။ ည (၂)
၁၁။ ဋ(ဘုရားအလှုခံထွက်ရာတွင် လူရိုင်းကခြင်းဖြင့် အသက်မွေးသူ ၊ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်)
အမှတ် စဉ် ၁ မှ ၁၁ သည် တိုင်းရုံးသို့ခေါ်ဆောင်မေးမြန်းခံရသည်။
၁၂။ ဥ (အလှပြင်)
စသုံးလုံးရှေ့ (၁၂လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းဒေါင့် တွင်ဖမ်းစီးခံရ ပြီး အမှတ် ၁ ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်)
အမှတ်စဉ် (၈) ဇ ၊ ရွှေကျင်တွင် အိမ်ငှားနေထိုင် ၊ Offfer လုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးသူ။ ၂၀၁၃ ခု
ဂျူလိုင်လ ၇နေ့ ည ၈နာရီ ၁၅ မိနစ် တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်နှင့် ဆွမ်းဟော်တယ်ကြားလမ်းလျောက်နေသည်။
လမ်းသွားလမ်းလာလူစည်ကားရာအချိန်။ လမ်းမီးများလဲ လင်းလျက်ရှိသည်။ ကျုံးဘေးတွင် ထိုင်နေသည့်
ပြည်သူလုထူလဲအများအပြားလဲရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် အရပ်ဝတ် (ပိုဆိုး နှင့် အကျီအဖြူ စတစ်ကော်လံ
၀တ်ဆင်ထားသော)လူတစ်ဦးက ဆိုက်ကယ်ကို ရုတ်တရက်ထိုးရပ်လိုက်ပြီး သူ့နောက်သို့လိုက်သည်။
သူလည်းပြေးသည်။ နောက်ထပ် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက ထပ်ရောက်လာပြီး လူနှစ်ယောက်ဆင်းလာကာ
ရှေ့မှ နှစ်ယောက် နောက်မှတစ်ယောက်စုစုပေါင်းသုံးယောက်ဝိုင်းဖမ်းသည်။ပလက်ဖောင်းကျော်ပြေး
ရင်းဒေါက်ဖိနပ်ချော်ကာ မြောင်းထဲကျသည်။နောက်ပြန်လက်ထိပ်ခတ်ပြီး လည်ဂုတ်မှ တအား မလှုပ်နိုင်အောင် တံရားခံဖမ်းနည်းဖြင့်ဖိထားသည်။
လက်ထိတ်မှ လက်အားသွေးထွက်အောင် ရှသည်။ လိုက်ဒရတ်ကားပေါ်သို့ သွားစဉ် ရဲတစ်ဦးမှ ကန်သည်။
ကားပေါ်သို့တွန်းပြီး ဆောင့်တွန်းတင်သည်။ အသံမထွက်နှင့်ဟုလည်းကျိန်းသည်။ ကားပေါ်တွက် အရပ်ဝတ်နှင့်
ရဲ ၄ ယောက် အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ဖမ်းခံရသူသည် သူအပါအ၀င် ၄င်းကားပေါ်တွင်
၆ယောက်ပြည့်သောအခါ လမ်း၃၀ ရဲ တိုင်းရုံးသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကားပေါ်တွင်မင်းတို့ကို ဘာမှ
မလုပ်ဘူးမေးစရာရှိလို့ဟုပြောခဲ့သည်။ စခန်းရှေ့ရောက်တော့ ဆောင့်တွန်းပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီဝင်ခိုင်းတယ်။
တံခါးတွေ အကုန်ပိတ်လိုက်တယ်။ နောက်ထပ်အခန်းလေးထဲဝင်ခိုင်းတယ်။ တန်းစီခိုင်းတယ် ဖမ်းခံရသူအားလုံးကို
ရဲအင်အား ၁၀ယောက်ကျော် ၁၁ ယောက်လောက်က မထင်သလို ၀င်ကန်တယ်။ အဖမ်းခံရသူအားလုံးကို နားရင်း
၀င်ဝင်ရိုက်တယ်။ပုံစံလို့ပြောပြီးထိုင်ခိုင်းတယ် မိန်းမလိုထိုင်မိသူတွေကို ဆောင့်ကန်တယ်။ အပေါ်အကျီ ၊ ဘော်ဘီ များကို ဆောင့်ဆွဲချွတ်တယ်။ နို့ပေါ်များဖြင့် ချွေးမထွက်မချင်း ခုန်ခိုင်းတယ်။ အကြိမ် တစ်ရာနီးပါး
လောက်ရောက်သောအခါ ရပ်ခိုင်းတယ်။ ခုန်နေသည့်အချိန်တွင် ရဲအားလုံးက ရယ်မောလျက်ရှိတယ်။
(စွပ်ကျယ်အဖြူရောင်များကို ကိုယ်စီဝတ်ထားသည်) ။ ထို့နောက် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးပုံ ၊ အကျီ
ချွတ်လျက်ပုံ၊ ဘလာစီယာမပါပဲ နို့တုန်းလုံးပုံ။ ဆယ်ပြားမ ၏ နို့အား ဒုတ်များဖြင့် ထိုးသည်။ ရိုက်သည်။
မော်ဒန်ရှိုးလျောက်ခိုင်းသည် နို့တုံးလုံးဖြင့်၊ ရဲများက ဟားတိုက် လှောင်ပြောင်ကြသည်။ ဆဲဆိုကြသည်။
ကျွန်တော်ယောက်ျား ၊ မိန်းမမဟုတ်ပါဟူပြီး အော်ရသည်။ ယောက်ျားသံမပေါက်မချင်းထပ်ကာထပ်ကာ
အော်ရသည်။ မအော် လျှင် ရိုက်မည်ဟူပြီး သံဒုတ်တွင်ဆူးတပ်ထားသော ဒုတ်နှင့်၎င်း ၊ သေနတ်ဖြင့်
လည်းကောင်း ခြိမ်းခြောက်သည်။၄င်းနောက် ဇ အား မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းသည်။ (၁၀နာရီမှာ ည ၂)နာရီအထိ။
အကြောင်းမှာ သူသည်နယ်ကလာသောကြောင့် အာမခံမည့်သူမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ည၂နာရီထိုးသောအခါ
စစ် ဖိနပ် ၂ရံ တိုက်ပေးရသည်။ စခန်းတွင်းရှိ ခုံများအားသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရသည်။
ထို့နောက်ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်မေးသည်။ (အမည်၊အသက်၊ မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်၊ လုပ်ငန်း စသဖြင့်) နောက်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းသည်။ ကျုံးဘေးကို ဒီတပတ်အတွင်းမလာနှင့်ဟုဆိုသည်။ နောက်ပိုင်းတွေ ကျုံးဘေးလာချင်ရင်မိန်းမလိုဝတ်မလာနဲ့ ယောက်ျားလိုဝတ်လာဟုဆိုသည်။ရဲထဲဝင်မလားဟုလဲမေးသည် ထိုအခါ ကျန်သည့်မိန်းမလျာများကပါ မ၀င်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောသည်။ ပြန်ခါနီးတွင် မင်းတို့ကို ငါတို့က နာအောင်လုပ်လား၊ မင်းတို့ကိုဘယ်သူကမေးမေး ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဖြေဟုဆိုသည်။ ဘာပစ္စည်းမှလဲမယူဘူးဟုဆိုတာ ပြန်လွှတ်ပေးသည်။
အမှတ် ၁၁ ဋ မြောက်ပြင်မြို့ပတ်လမ်းတွင်နေထိုင်သည်။ ဘုရားအလှုခံများတွင် လူရိုင်းက ကခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
ညအချိန် ၈နာရီ ၁၅ တွင် ဆီဒိုးနားဟော်တယ်ရှေ့ ၂၆ -၆၆ လမ်းတွင် လမ်းလျှောက်နေစဉ် လူနှစ်ယောက်မှ သူ၏ လက်အားတစ်ဖက်စီ အတင်းချုပ်နှောင်ဖမ်းစီးခေါ်ဆောင်ကာ စလွန်းကားပေါ်သို့တင်သည်။ ကားပေါ်တင်ရင်း အရပ်ဝတ် နှင့်ရဲနှစ်ဦးက တစ်ချက်စီဆောင့်ဆောင့်ကန်သည်။ ကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါ လက်ထိပ်ခတ်ရန် လက်တောင်းသောအခါ သူသည် ငြင်းဆန်သည်။ ကားပေါ်တွင် အခြောက်မတစ်ဦးရောက်ရှိနေနှင့်ပြီးလက်ထိပ် နောက်ပြန်ခတ်အနေအထားအားမြင်တွေ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ယာဉ်မောင်းရဲတစ်ယောက်သာကျန်သည်။ ကျန်သည့်သူများက အခြားသူများအားသွားရောက်ဖမ်းစီးစဉ် သူသည် ကားတံခါးအားဖွင့်ပြီးဆင်းအပြေးတွင် တစ်ဖက်လမ်းကြောမှလာသောကားဖြင့် တိုက်မိမည့်အခြေအနေမှ ရှောင်လိုက်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကင်းဝေးသွားသည် သူလဲ ခြေဦးတည့်ရာသို့ပြေးသောအခါ ၄င်းအားတင်ဆောင်ခြင်းခံရသည့်ကားက သူ့နောက်မှ သဲကြီးမဲကြီးမောင်းလိုက်သည်။ သူလဲပြေး ရင်းလွတ်သွားခဲ့သည်။
အမှတ်စဉ် (၄) ဃ နန်းရှေ့ အောင်စစ်သည်ရပ်ကွက်(အမှတ် ၁ ရဲစခန်းအနီးတွင် ) နေထိုင်သူ၊ ယခင်မိုးကြိုးငှက်ငယ်။
ယခု (PSI-Top Center ) အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ) ။ ည ၈နာရီ ခွဲအချိန် ကျုံး အရှေ့ တောင်ဒေါင့် ၂၆ လမ်းနှင့် ၆၆
လမ်းထိပ်တွင် အားကစားပြုလုပ်နေစဉ် အရပ်ဝတ်နှင့် ရဲတစ်ယောက်မှရောက်ရှိလာပြီး ဟိုမှာမင်း သူငယ်ချင်းတွေ
ကခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်ဟုဆိုကာခေါ်သည်။ သူသည် မသွားချင်ဟုဆိုကာ ငြင်းသည် ထို အချိန်တွင် နောက်ထပ် အရပ်ဝတ်နှင့်လူတစ်ယောက်ထပ်မံရောက်လာကာ နှစ်ယောက်ပေါင်းကာ သူ၏လက်တစ်ဖက်စီအားအတင်းချုပ်နှောင်သည်
နောက်ထပ် အရပ်ဝတ်နှင့်နှစ်ဦးထပ်မံရောက်လာကာ လက်နှစ်ဖက် ချုပ်ခံနေရသည့်ကြားမှ ကိုယ်လုံးအား
ချုပ်နှောင်ကာ လိုက်ဒရပ်ကားပေါ်သို့ ဖမ်းဆီး တင်ဆောင် ခံရသည်။ ကားပေါ်သို့ ခေါ်သွားချိန်တွင်
၄င်း၏ကျော်အား သုံးချက်တိတိ ထိုးသည်။ ရဲတစ်ဦးမှ“ငါလိုးမ အခြောက်တွေ မင်းတို့ကို ဖမ်းစရာပုဒ်မ မရှိရင်
ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ ထောင်ချပြစ်မည်ဟု ကြိမ်းဝါးသည်။ ကားပေါ်တွင် အဖမ်းခံ၇သူ သူအပြင်လေးဦးရှိသည် offer
၂ဦးနှင့် အပုန်းမ(၁) ဈ တို့ ဖြစ်သည်။ကားပေါ်တွင် ရဲ ၄ယောက်က အရံသင့်စောင့်နေသည်။ ဖမ်းစည်းသည့်
အစီစဉ်ပြီးချိန်တွင် လမ်း၃၀ ရဲတိုင်းရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကားပေါ်တွင် မင်းတို့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူး
မေးစရာရှိလို့ ဟုဆိုသည်။ စခန်းသို့ရောက်သောအခါ ဃ ၏လက်တစ်ဖက်အား အခြားသော အပုန်းမ (၁) ဈ
နှင့်တွဲကာလက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည်။ စခန်းအတွင်းသို့ရောက်သောအခါ တံခါးများအားလုံးကိုပိတ်လိုက်သည်။
စွပ်ကျယ်အဖြူဝတ်လျက် အသားမဲမဲ။ အရပ်ရှည်ရှည် ၊ ကွမ်းစား ၊မျက်လုံးပြူပြူး နှင့် ရဲကှဃ အား မတရား
၀င်ဝင်ရိုက်သည်။ ကန်သည်။ စုစုပေါင်းရဲအင်အား ၉ယောက်မှ ၁၀ယောက်နီးပါးရှိသည်။ စပလိန်လို သံပျော့ဒုတ်နှင့်လဲ
ခြေထောက်များ ကျောများအားရိုက်သည်။ အဖမ်းခံရသည့်မိန်းမလျာအားလုံးကိုရိုက်သည် ကန်သည်။
ဃ ၏ညာဘက်လက်မောင်းကို တအားကန်သည်။ ယခုချိန်ထိ အောင့်နေဆဲ နောက် ခပ်တောင့်တောင့်
အရပ် မပုမရှည် နှင့် ရဲ က ဃ ခေါင်းငုံပြီးထိုင်နေသည်ကို ဆံပင်ငယ်ထိပ်မှ စုကိုင်ဆွဲပြီး မော့ကာ မျက်နှာ
ကို ဖြတ်ရိုက်သည်။ ဃ မှ ကာလိုက်သောအခါ ကာသည့်လက်နှင့်ပင် မိမိ၏မျက်နှာကို မိမိလက်နှင့်ရိုက်မိသည်။
ယောက်ျားတန်မဲ့အခြောက်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီး ဆဲရေးတိုင်းထွာသည်။ ထို့နောက်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။အကျီချွတ်ခိုင်းသည်။ ဓာတ်ပုံထပ်ရိုက်သည်။ ဘော်လီအကျီချွတ်ခိုင်းသည် ချွတ်နေစဉ် အသားဖြူဖြူ
ခပ်တောင့်တောင့် အရပ်အနေတော် (လူမြင်လျှင်မှတ်မိ)ထိုသူက ဘော်လီအား တအားဆောင့်ဆွဲချွတ်သည်။
ဘော်လီသည် ရစရာမရှိစုပ်ပြဲသွားသည်။ ထို့နောက် အပေါ်အကျီမပါပဲ ချွေးများထွက်သည့်အထိ ခုန်ခိုင်းသည်။
တိုင်းစီထိုင်ခိုင်းသည်။ (ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတောင်းသည်။ အိမ်သို့ဖုန်းဆက်ခေါ်သည်) ဃ ၏ ရဲ အသိ
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သည် ထို တိုင်းရုံးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ သူတို့မှ နေပြီး မိုးကိုကိုအား
အိမ်မှ အာမခံလာထုတ်သောအခါ အိမ်မှလာသောသူအား ကိုယ်ရေးအကျဉ်းထပ်မံမေးကာ ခနစောင့်ခိုင်းသည်။
စောင့်ခိုင်းချိန်တွင် ဃ အား ထပ်မံပြီး ရဲတစ်ဦးက အခန်းတစ်ခန်းအတွင်း နှစ်ယောက်တည်းသီးသန့်ထပ်မံတွေ့ဆုံသည်။
သူပြောသောစကားမှာ ”ဖင်ခံတာ ဘာကောင်းလဲ။ ငါ မင်းကိုလိုးပေးရမလား၊ ဒီလောက်တောင်အခြောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်
ငရုတ်ကျည်ပွေ့ကို ငရုတ်သီးထောင်းပြီးမင်းဖင်ထဲကိုထိုးထည့်ရမလား။ကွန်ဒုံးတွေကဘာလို့ဆောင်ထားသလဲစသည့်မေးခွန်းများကိုမေးပြီ ၀န်ခံထိုးခိုင်းကာ ပြန်ခိုင်းသည် (ခံဝန်တွင်ရေးထားသည့်အချက်မှာ နောက်ဘယ်တော့မှ ကျုံးဘေးမလာတော့ပါဘူး။ နောက်ကို မိန်းမလိုမ၀တ်ဆင်တော့ပါဘူးဟူသည့်အချက်များကိုတွေ့ရသည်။)အိမ်ရောက်သောအချိန်မှာ တစ်နာရီကျော်နေပြီ။
(မှတ်ချက် စသုံးလုံးရှေ့တွင် offer မတစ်ယောက်သည် ကားရပ်ကာထိုင်နေသည့် အရာရှိတစ်ဦးအား ဈေး
စကားသွားပြောသည့်အတွက် စခန်းများသို့ဖုန်းဆက်ခါ ဖမ်းခိုင်းခြင်းဟု မိုးကိုကို သိခဲ့ရသည်။)
အမှတ်စဉ် ၁၂။ ဥ မြောက်ပြင် အိုးဘိုရပ်ကွပ်တွင်နေထိုင်သူ ပန်းအလှဆင် (သတိုးသမီးလက်ကိုင်ပန်း၊ကားပန်းအလှဆင်)ခြင်းဖြင့်
အသက်မွေးသူ ည ကိုးနာရီ အချိန် (7.7.13)တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရှေ့တွင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့်ချိန်းထားသဖြင့်
ဆိုင်ကယ်ကြုံလိုက်စီးခဲ့သည်။ဆိုင်ကယ်ကျုံသည် စသုံးလုံးရှေ့သို့သာရောက်သဖြင့် ထိုေ၇ှ့တွင်ဆင်းလိုက်သည်။
၄င်းအချိန်၌ သူအားစိတ်ဝင်စားသဖြင့် ဆိုင်ကယ်နောက်မှ ကပ်လိုက်လာသော စက်မှု ၁ တွင်နေထိုင်သည့် အသက်
၂၃/၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားနှစ်ဦးက စက်မှု ၁သို့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး ဆီဒိုးနားထောင့်သို့လိုက်ပို့ကူညီမည်ဆိုသဖြင့် ရခိုင်မသည် ဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့တက်ကာလိုက်သွားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နောက်မှ ကားတစ်စီး ဆိုင်ကယ် နှစ်စီးလိုက်လာသည်။
ရှေ့တွင်လည်း အရပ်ဝတ်ဖြင့် ရဲများက လမ်းမပေါ်တွင်ပိတ်ကာ တားဆီးသည့်အနေအထားဖြင့်ရပ်နေသည်။
ဆိုင်ကယ်က အရှိန်လျော့သွားသောအခါ ရခိုင်မကို ဆွဲချသည်။ သူမအောက်ကို ရပ်လျက်ရောက်သွားသည်။
မောင်းနေသည့် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ရှိ အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုလဲ လည်ဂုတ်မှ ကိုင်ကဆွဲချသည်။ ဆိုင်ကယ် လဲကျသွားသည်။
ဥ အား လက်တစ်ဖက်တည်းသာ လက်ထိပ်ခတ်လိုက်သည် ကျန်တစ်ဖက်က လွတ်လျက် (လက်ထိပ်ခတ်သည်မှာ ကျပ်လွန်းပြီး ကွဲရှကာ သွေးထွက်ဒဏ်ရာရရှိသည်) ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးကို နောက်ပြန်အနေအထားနှင့်လက်ထိပ်ခတ်သွားသည်။
ရဲစခန်းရောက်သောအခါ ဥ အား ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ အကျီချွတ်ခိုင်းသည် ရှေ့။နောက်၊ ဘေး သုံးပုံတိတိရိုက်သည်။
ရင်ဘတ် အောက် ဘလာစီယာကိုလဲချွတ်သည်။ နို့ကို လဲ ရဲ နှစ်ဦးမှ တစ်ဖက်စီကိုင်ကြည့်သည်။ နောက် ဘောင်းဘိချွတ်သည် ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီပါချွတ်ကြည့်သည်။ လူမြင်ကွင်းတွင်ဖြစ်သည်။ မူးရစ်ဆေးဝါးနှင့်ပက်သက်ပြီး စစ်ဆေးသည်ဟုလဲပြောသည်။ထို့နောက်ဘာလာလုပ်တာလဲမေးသည်။ ဒီအချိန်အပြင်မထွက်ရဘူးလားမေးသည။်
ဥ က သူငယ်ချင်းနှင့်ချိန်းထားသည့်အတွက် အပြင်ထွက်သည်။ အခုအချိန်သည် ၉နာရီကျော်သာဖြစ်သေးသည့်အတွက် အချိန်မလွန်သေးပြန်ပြောသည်။မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်နေတဲ့အခြောက်တွေ ရှိတယ် အဲဒါ မင်းသိလားဖြေလို့ပြောသောအခါ။
ထိုအခါ ရဲက ရိုက်မည့်ဟန်ပြင်ကာ မင်းမပြောဘူးလား။ မင်းမပြောရင်ငါပြောမယ်ဟုဆိုတာ ထပ်မံ အစ်အောက်မေးပြန်သည်။
ဥ ကလဲ သူမတယ်မသိကြောင်းပြန်ပြောသည်။ထို့နောက် အလုပ်အကိုင်အားမေးသည်။ သူမကလဲ ပန်းအလှဆင်ကြောင်း ဘယ်ဆိုင်မှာ ဘယ်တုန်းကစလို့ဘယ်နှနှစ်လုပ်ဖူးကြောင်း ယခုလုပ်သည့်ဆိုင်အားလဲပြောပြပြီး သူ၏ဆရာများကိုလဲပြောပြခဲ့သည်။
နောက်ထပ် အဖော်(ကွိုင်)ဘယ်နှစ်ခုပါလဲဟုမေးသည်။ သူမ မှာ တစ်ခုမှမပါကြောင်းဖြေသည်။ ပိုက်ဆံနှစ်ထောင်သာပါကြောင်း
ထိုပိုက်ဆံမှာလဲ ကယ်ရီငှားစီးရန်သာဖြစ်ကြောင်း။ ပြောသည်။ ထိုနောက် ရဲက သူမအား အချုပ်ခန်းထဲသီးသန့်ခန်းထဲသို့ပြန်ပို့သည်။
နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်နေသောအခါ ဗိုလ်ကြီးက စစ်ဆေးစရာရှိတယ်ဟုဆိုကာပြန်ခေါ်သည်။
ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်များကိုစစ်သည် ။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းစစ်သည်။ ထို့နောက်ဆဲဆိုသံကြားရသည်။ ယောက်ျားတန်မဲ့
အခြောက်ကိုလိုက်ပြီး မန်း(လိုက်ပြော)ရမလား။ အုပ်ချင်ရင်မိန်းမအစစ်တွေ သွားအုပ်ပါလား။ အချောင်လုပ်ချင်
ဥ ကို ဗိုလ်က ထပ်မေးတယ် လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ပက်သက်ပြီး။ မင်းက ခံပဲခံတာလား။ နှစ်လိုင်းရတာလား။
ဘယ်လိုခံတာလဲ။ ဖင်ခံရတာကောင်းလား။ မင်းက မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ငယ်ငယ်ကနဲ့တူတယ်။မက………
…ငယ်ငယ်က ငါတစ်ခါဖမ်းဘူးတယ်။ တချို့က ဖင်ခံရင်းပြီးတယ်ဆို မင်းကောပီးလား။ ဂွင်းကောတိုက်ဖူးသလား။
(ဥ က ယောက်ျားလေးရှိစင်အခါက တိုက်ဖူးကြောင်းဝန်ခံသည်)။ အခြောက်မ သက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ
ဖင်ခံရင်ဘယ်နေရာမှာသွားခံတာလဲ တာရိုးပေါ်လား ၊အောင်ပင်လယ်လယ်ကွင်းထဲလား။ မန်းတလေးတောင်ပေါ်လား။
ဂျီတီစီဘက်လား စသုံးလုံးရှေ့မှာခံဘူးလား။ ၉၅ ခြေလျင်တပ်ရင်းနားမှာခံဘူးလားဟု ရဲမှမိန်းမလျာများကျက်စားတက်သော နေရာများအားတစ်ရေရာချင်း ပြောသွားသည်။
ဥ မျက်လုံးပြူသွားသည်။ ထိုအခါ ဗိုလ်ကြီးမှနေပြီး မအသြနဲ့ နန်းရှေ့ စ က ငါတို့စခန်းက ငါ့တပည့်ရဲ့မိန်းမပဲ သူကအကုန်ပြောထားတာ။ မင်းဒီညမပြန်နဲ့တော့ ငါတို့ ဗားတိုက်မှာ အိပ်ပါလား။ တခြားအခြောက်မတွေဆိုရင် ငါတို့ အမှတ်(၁)မှာလာလာခံတယ်။ န၊ပ၊စ၊ဇ။ဗ ဘ။။လ ၀ စတဲ့အခြောက်တွေပေါ့။ နောက်မင်းတို့ ညဆိုလှိုင်းမှာထိုင်တာသိတယ်။ မင်းတို့သောက်နေကျဘီယာဆိုင်ကိုလဲသိတယ်။စသဖြင့် ဥ အား မြူဆွယ်သူ ညအိပ်ရန်။ ထို့နောက် မြောက်ပြင်အိမ်တွင်သူငယ်ချင်းဘယ်နှစ်ယောက်နေလဲ။ ဘယ်အချိန်ထွက်လဲမေးကာ စသုံးလုံးရှေ့နှင့် ဆီဒိုးနားထောင့်အားယနေ့၂ ပတ်တိတိ မလာရန်ဝန်ခံကတိထိုးခဲ့ရသည်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအားမှတ်သားထားသည်။ ည တစ်နာရီခွဲတွင်ဒုရဲအုပ်တစ်ယောက်က သူနေရာထိုင်ရာအိမ်ရှေ့ထိ လိုက်ပေးခဲ့သည်။
အမှတ်စဉ် (၁) က ၇၈လမ်း ၄၁၊ ၄၂ လမ်းကြားတွင် နေထိုင်သူ အလှပြင်လုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးသူ
၂၀၁၃ ဂျုလိုင်လ ၇ ရက် ည ၈နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရှေ့ ကျုံးဘေးတွင်တစ်ဦးတည်း
ထိုင်နေစဉ် အရပ်ဝတ် ၀တ်စုံဝတ်ဆင်ထားသော ရဲနှစ်ယောက်သည် ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီး
ဘာမှမပြောပဲ ဖမ်းချုပ် ပြီး နောက်ပြန်လတ်ထိတ်ခတ်သည်။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သည် လက်တွေဋ္ဌ
လက်ထိတ်အသွားမှ ထိရှမိကာ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာများရရှိသည်။ ထိုသို့ရုန်းကန်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေစဉ်
နောက်ကျောများ အား ထိုးနှက်ခြင်း ၊ခြေထောင် တင်ပါးတို့အား ကန် ခြင်းများ လဲရှိသည်။
နားအုံများလဲ ရိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘင်ကားပေါ်သို့ တင်ဆောင်သည်။ ကားပေါ်တွင် င ၊ စ
(ရဲတိုင်းဝင်းအတွင်းတွင်နေထိုင်သော တပ်ကြပ်ကြီး ယာဉ်ထိန်း၏သား)၊ဂ တို့ရောက်ရှိနေနှင့်သည်။ ထို့နောက် လမ်း၃၀ ရဲတိုင်းရုံးသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း ကားပေါ်မှဆင်းခိုင်းကာ အခမ်း သေးထဲသို့ခေါ်ဆောင်သြွးသည်။ ရောက်ရောက်ချင်းပင် ဖမ်းဆီးသောရဲနှင့် စခန်းတွင်ရှိနေသောရဲ စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်လောက်က ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်သည်။ ခြေထောက်များနှင့်ဝိုင်းကန်သည်။ အဲရိုးဆော့လို ဖိနပ်များဖြင့် ကျော၊ ရင်ဘတ်များကို ၄င်းဖိနပ်ဖြင့်ရိုက်သည်။ မျက်နှာကိုလက်ဖြင့်ရိုက်သည်။ (ဒေါင်ကောင်းကောင်း အသားညိုညို အသက် ၃၂/၃၃ လောက်ရှိ၊ ကွမ်းစား မျက်လုံးပြူပြူး လူမြင်လျှင်မှတ်မိ )ထိုရဲသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။င ၏ ပါးနှစ်ဖက်ကို စုံညှပ်ရိုက်သည်။ မူရင်းအသံပြာတာတာဖြစ်သည်ကို အသံသြသြ မထွက်မချင်း တခါရိုက်လျှင်သုံးချက်သုံချက် ဆင့်ဆင့်ရိုက်သည်။ ) ထိုနောက် ဓာတ်ပုံကို အဖွဲ့လိုက်ပုံရိုက်သည်။ တစ်ယောက်ချင်းပုံရိုက်သည်။ အကျီချွတ်ပြီးရိုက်သည်။ နို့ဖော် ပြီးတခါထပ်ရိုက်သည်။ ရဲနှစ်ဦးက မဆယ်ပြား၏နို့အား လက်ဖြင့် ညှစ်ကြည့်ကြသည် ကိုင်ကြည့်သည်။ စပရိမ်လို ပျော့ပျော့ ဒုတ်နှင့် ရိုက်မည်အလုပ်တွင် ကကြီး က မရိုက်ပါရန်တောင်းပန်သည်။ “မလုပ်ပါနဲ့ ကြောက်ပါတယ် ကြောက်ပါတယ် ”ဟု အော်ပြီးတောင်းပန်သည်။ထို့နောက် မိန်းမလျာသုံးဦးအား မော်ဒန်ရှိုးလျောက်ခိုင်းသည်။ လို့နောက်အိမ်သို့အာမခံဖြင့်လာခေါ်ရန် အကြောင်းကြားသည်။ အိမ်မှရောက်လာသောအခါ ရဲတစ်ဦးနှင့် က နှစ်ယောက် တည်း ဆုံတွေ့ကာ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းယူသည်။ ခံဝန်ကတိထိုးရသည်။ ထိုသို့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းယူနေစဉ် ထိကပါးရိကပါး စော်ကားသော စကားများပြောသည်။ ထိုစကားများမှာ အခြောက်တွေ ၊သူခိုးခြောက်တွေ၊ ယောက်ျားဖြစ်ရဲ့နဲ့ ဘာလို့ဖင်ခံနေတာလဲ။ ဖင်ခံတာကောင်းလား။ ငါ လိုးပေးရမလား။ မင်းဖင်ခံရင် ဘယ်လောက်ယူလဲ စဖြင့်မေးမြန်းသည်။ ယနေ့ ၂၀၁၃ ဂျုလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မနက်အထိပင် တစ်ကိုယ်လုံး ကျော ၊ရင် ၊ ခြေထောက်၊ ပေါင် လည်ပင်း မျက်နှာများသည် ဒဏ်မပေါ်ပဲ နှိပ်စက်ခံ အကန်ခံရသည့် အတွင်းဒဏ်ရာများနှင့် နာကျင်လျက်ရှိသည်။ မိမိ သည် မည်သည့်ပြစ်မှုနှင့် အဖမ်းခံရသည်ကို မသိကြောင်း ၊မိမိသည်လည်းပြစ်မှုမှ မကြူးလွန်ပါကြောင်း ။ မကျေနိုင်ပဲရှိပါကြောင်း မကျေနပ်သော်လည်း ကြောက်ရွံ့ သည့်စိတ်များ ကိန်းအောင်းနေသည်။ မည်သို့ပြန်လည်တိုင်ကြားရမည်ကိုမသိပါကြောင်း။ အဖမ်းခံရသော မိန်းမလျာများ စည်းလုံးညီညွန်ပါက ပြန်လည်တိုင်ကြားလို ကြောင်း စိတ်မကောင်း ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ပြောပြသည်။ —
(Tun Hla Phyu FB မှ)
← ၇၇ နှစ် အတွင်း ပထမ ဆုံး အကြိမ် ၀င်ဘယ်ဒန် ဆု ကို ဗြိတိသျှ တို့ဆွတ်ခူး
ကမ္ဘာ့ရေစီး ကြောင်း →
2 responses to “မန္တလေး တွင် မိန်းမလျာများအား ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်”
Pingback: MyanmarLatestNews » မန္တလေး တွင် မိန်းမလျာများအား ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်·
Iris July 11, 2013 at 3:56 pm · ·
How could they do that to another human being? Are they even human? I just can’t believe it. Gave me chills and I’m sick to the core!